Wararka Gudaha – Page 3 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhageyso Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada Ee Radio Alfurqaan.
Axmad	 May 16, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 16 05 2019.…
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah: Sheekh Cali Katiin(Dhageyso 11)
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah waa kitaab qayim ah oo si gaar ah u taabanaya haweenka muslimaaka ah, waxaana Idaacadda Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta Islaamka. Halkan ka dhageyso Dersiga 11-aad ee…
Kitaabka Qasasul Anbiyaa; Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin(Dhageyso 11)
Kitaabka Qasasul Anbiyaa waxaa munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin oo kamid ah culimada diinta Islaamka ee Soomaaliyeed. Halkan ka dhageyso Dersiga…
Kudhawaad 10 Askari oo Afrikan ah oo ku dhintay Qarax ka dhacay Cabriska.
Qarax xoogan oo shalay ciidamada Shisheeyaha lagula eegtay deegaanka Carbiska ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa ku gaaray khasaare culus. Warar la helayo ayaa xaqiijinaya dhimashada 8 askari oo katirsan ciidamada Shisheeyaha,…
Dagaal Askar lagu dilay oo ka dhacay duleedka Garbahaarrey.
Dagaal culus ayaa duleedka degmada Garbaaharrey ee xarunta gobolka Gedo ku dhexmaray ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa maamulka Jubbaland. Ciidamada Mujaahidiinta ayaa dagaal kedis ah ku qaaday ciidamo katirsan…
Dhageyso Warka Duhur Ee Radio AL furqaan
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo muhiim ah. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 16 05 2019
Howlgallo Askar lagu dilay oo ka kala dhacay Halgan iyo Bariire.
Wararka kusoo dhacaya warqabadka Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayaa xaqiijinaya in howlgallo milliteri ay ka dheceen degmada Halgan ee gobolka Hiiraan iyo deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha hoose. Askar Itoobiyaan ah oo ku…
Sheekh Abuu Muscab oo faafahiyay howlgalladii ay fuliyeen Saacadihii lasoo dhaafay.(Dhagayso)
Afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheekh Cabdul-caziiz Abuu Muscab ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay wuxuu faafaahin ka bixiyay howlgalladii ciidamada mujaahidiinta ay fuliyeen 72-dii saac ee lasoo dhaafay.…
Halkaan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warka subaxnimo oo saakay khamiis ah lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan ka Dhageyso warka subax 16 05 2019